နှစ်​သစ်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » နှစ်​သစ်​	5
Posted by ကာရံ on Apr 17, 2015 in Poetry |5comments
နှစ်​သစ်​ကူးချိန်​ ရပါ​စေ …….
အိုလူသား​ရေ နှစ်​သစ် နှစ်​သစ်​
အချစ်​စစ်​များ ပိုင်​ပါ​စေ ……..
ဆူးများကင်းလို့ လိုရာပန်းတိုင်း ​
အပြုံးလည်း​ဝေ ကာရံချစ်​​သော သူငယ်​ချင်းတို့​ရေ
ကာရံ ၁၇့ ၎့ ၂၀၁၄
uncle gyi says: အေးချမ်းမှုတွေနဲ့နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေဗျာ
ကာရံ says: ​ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်​ပါ​စေ ဆု​ပေးတဲ့သူလည်း ​အေးချမ်းပါ​စေ​နော်​
လုံမလေးမွန်မွန် says: ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်….
မြစပဲရိုး says: Same to you ပါ ကာရံ ရေ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
Alinn Z says: .ဖွေးဖွေးနဲ့ ခီညား ဘာပတ်သက်ခဲ့သလဲ